Fetim-pirenena etsy Mahamasina: tapakila maimaimpoana ny hidirana amin’ny matso | NewsMada
Hisokatra ho an’ny rehetra, saingy ho voafetra. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika fa hisy ny fizarana tapakila maimaimpoana amin’ny fanatrehana ny fetim-pirenena ny 26 jona izao.
Hisy ny fakana tapakila eny anivon’ny boriborintany enina sy eny anivon’ireo distrika eto Analamanga ary ho maimaimpoana izany, ny alakamisy izao. Na izany aza, ferana ny isan’ireo afaka hanatrika izany etsy amin’ny kianja Barea Mahamasina. Tombanana ho eo amin’ny 8 000 ireo mpijery afaka hanatrika izany. Tsy maintsy eo koa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ka tafiditra ao anatin’izany ny fanajana ny elanelana ho an’ireo mpijery rehetra ho an’ny eo aloha sy ny aoriana ary ny havia sy havanana eo amin’ny seza. Ho hentitra koa anefa ireo tompon’andraikitra amin’ny fepetra horaisina fa tsy ho tafiditra ao anaty kianja ireo tsy manana izany tapakila maimaimpoana fidirana izany.
Afomanga, lahateny, lanonana…
Ankoatra izany, hanomboka amin’ny 3 ora sy sasany ny matso ataon’ny Foloalindahy raha hisokatra ho an’ny rehetra, manomboka amin’ny 9 ora maraina kosa ireo vavahady fidirana miisa enina eo amin’ny kianjan’ny Barea.
Anisan’ny hiatrika izany eny an-toerana ny filoha Rajoelina Andry ary handaha-teny ho an’ny vahoaka malagasy amin’izao fanamarihana ny faha-61 taona niverenan’ny Fahaleovantena izao. Eo koa ny lanonana sy fety miaraka amin’ny fanehoana ireo jiro maroloko eo Mahamasina sy ny manodidina. Tombanana ny hisian’ny karazana afomanga, hiseho amin’ny endrika hafa, tahaka ny fahita any amin’ireo firenen-kafa rehefa misy lalao baolina kitra lehibe.
Fitandroana ny filaminana sy ny fitaterana
Na izany aza, tokony ho hentitra ny fitandroana ny filaminana na anatiny na ivelany na efa eo aza ireo “caméra de surveillance” anjatony hijerena sy hanaraha-maso hatramin’ny bitika indrindra ny zava-miseho rehetra. Ny tokony hikajiana ireo fitaovana samihafa sy ny fotodrafitrasa rehetra.
Etsy andaniny, tokony hojeren’ny tompon’andraikitra ny lafiny fitaterana satria tombanana fa mety ho alina vao hirava ny lanonana. Misy lavitra fodiana ireo ho avy sy hanatrika izany.
Araka izany, mba ho fetim-pirenena hieren-doza, tsy tahaka ny niseho tamin’ny fitondrana teo aloha ny fankalazana ny faha-61 taonan’ny niverenan’ny Fahaleovantena.